အမေ ကို အရမ်းချစ်တဲ့သားတစ်ယောက်ရဲ. မင်္ဂလာအခမ်းအနား
May 25, 2018 By Buzz Myanmar News in နိုင်ငံတကာ Tags: ပရိသတ်, မင်းသား, အမေ
မေလ ၁၉ရက်နေ့က ဗြိတိန် ရဲ့တော်ဝင်မင်းသားငယ် Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအသိပါပဲ။သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကို ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေ၊အထူးဧည့်သည်တွေ၊အနုပညာရှင်တွေ များစွာတက်ရောက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
မင်္ဂလာအခမ်းအနားပွဲကျင်းပနေစဉ်မှာ လာရောက်ဂုဏ်ပြုကြတဲ့ ပရိသတ် တွေစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိခဲ့တာကတော့ လွတ်နေတဲ့ထိုင်ခုံတစ်ခုံပါပဲ။တော်ဝင်မင်းသားရဲ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားပွဲကျင်းပရာနေရာမှာ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအားလုံးရောက်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ နေရာတစ်နေရာ၊ ထိုင်ခုံတစ်ခုံစာလွတ်နေခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်မင်းသား William ရဲ့ဘေးကထိုင်ခုံမှာ လွတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမျက်စိစူးရှတဲ့ပရိသတ်တွေမြင်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီလွတ်နေတဲ့ခုံဟာ မင်းသား Harry က သူ့ရဲ့အမေ Diana ကို သတိရတမ်းတစွာနဲ့ လေးစားသမှုပြုကာထိုင်ခုံတစ်နေရာစာချန်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့အားလုံးက သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မင်းသမီး Diana ၊ မင်းသား Harry ရဲ့အမေဟာ Harry အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်မှာ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ Princess Diana ဆိုတာ ကြွင်းကျန်နေဆဲပါ။ သားဖြစ်သူကလည်း သူ့ရဲ့အမှတ်တရနေ့၊အခမ်းအနားနေ့မှာ သူ့ရဲ့အမေကိုသတိရတမ်းတနေခဲ့ပါလိ့မ်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အမေအတွက် နေရာတစ်နေရာစာချန်ထားတာဖြစ်နိုင်သလို တစ်ချို့ကလည်းဘုရင်မကြီး Elizabeth ရဲ့မြင်ကွင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဘုရင်မကြီးရှေ့မှာ ဘယ်သူမှထိုင်ခွင့်မရှိတာလို့လည်းယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မင်းသား Harry ဟာ သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ အမေဖြစ်သူကို သတိရနေတဲ့အကြောင်းကို ထိုင်ခုံတစ်နေရာစာ ချန်ထားတာတစ်ခုတည်းနဲ့သက်သေပြခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းသမီး Diana ဟာ သေဆုံးချိန်မှစလို့ ၂၁နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်ထိ၊အခုအချိန်ထိတိုင်အောင် တော်ဝင်မိသားစုမှာနေရာယူနေဆဲပါပဲ။သူမရဲ့သားငယ်လေး Harry နဲ့Meghan ဟာ Diana ချစ်မြတ်နိုးလှတဲ့ forget-me-nots ပန်းလေးတွေနဲ့ လက်ကိုင်ပန်းခက် လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
သတို့သမီးအရံတွေကိုလည်းထိုပန်းလေးတွေနဲ့ပဲ အလှဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုပန်းလေးတွေက Diana ဂရုတစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ နန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲက ခူးဆွတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြူရောင်နှင်းဆီ ပန်းတွေအများကြီးစိုက်ပျိုးထားသလို forget-me-nots ပန်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။မင်းသား Harry ဟာ သူ့ရဲ့အမေချစ်မြတ်နိုးလှတဲ့ပန်းလေးတွေကို သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဂုဏ်ယူစွာဆင်ယင်ခဲ့သလို သူ့အမေအနှစ်သက်ဆုံး သီချင်းကို သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာ တီးခတ်စေခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမျက်ရည်ဝဲလျက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာလည်း Harry ဟာ ဆိုဖာအစိမ်းရောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာ ကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထိုင်ခုံက အထူးသီးသန့်အမှတ်တရတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုဖာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တုန်းက Diana ဟာ အဲ့ဒီဆိုဖာပေါ်မှာ Harry လေးကိုချီပြီးအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသား Harry ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြသူတွေကလည်း အမေကိုသတိရတမ်းတနေသလို ချစ်တဲ့သူနဲ့မင်္ဂလာ လက်ထပ်ပွဲဆင်နွှဲရလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ Harry အတွက် ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။စိတ်ခံစားချက် လွယ်သူတစ်ချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ရင်း မျက်ရည်တောင်ကျခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။မင်းသား Harry နဲ့ Meghan တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်လေးတွေပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အမကေို အရမျးခဈြတဲ့သားတဈယောကျရဲ. မင်ျဂလာအခမျးအနား
မလေ ၁၉ရကျနကေ့ ဗွိတိနျရဲ့တျောဝငျမငျးသားငယျ Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့မင်ျဂလာပှဲကငျြးပခဲ့ကွတာ တဈကမ်ဘာလုံးအသိပါပဲ။သူတို့ရဲ့မင်ျဂလာဆောငျကို ရငျးနှီးတဲ့မိတျဆှေ၊အထူးဧညျ့သညျတှေ၊အနုပညာရှငျတှေ မြားစှာတကျရောကျ ဂုဏျပွုခဲ့ကွပါတယျ။
မင်ျဂလာအခမျးအနားပှဲကငျြးပနစေဉျမှာ လာရောကျဂုဏျပွုကွတဲ့ ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံးရှိခဲ့တာကတော့ လှတျနတေဲ့ထိုငျခုံတဈခုံပါပဲ။တျောဝငျမငျးသားရဲ့မင်ျဂလာ အခမျးအနားပှဲကငျြးပရာနရောမှာ ဖိတျကွားထားတဲ့ဧညျ့သညျတျောတှအေားလုံးရောကျပွီဖွဈပမေဲ့ နရောတဈနရော၊ ထိုငျခုံတဈခုံစာလှတျနခေဲ့ပါတယျ။တျောဝငျမငျးသား William ရဲ့ဘေးကထိုငျခုံမှာ လှတျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကိုမကျြစိစူးရှတဲ့ပရိသတျတှမွေငျတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလှတျနတေဲ့ခုံဟာ မငျးသား Harry က သူ့ရဲ့အမေ Diana ကို သတိရတမျးတစှာနဲ့ လေးစားသမှုပွုကာထိုငျခုံတဈနရောစာခနျြထားခဲ့တာပဲဖွဈတယျလို့အားလုံးက သဘောပေါကျခဲ့ကွပါတယျ။
မငျးသမီး Diana ၊ မငျးသား Harry ရဲ့အမဟော Harry အသကျ ၁၂နှဈအရှယျမှာ သဆေုံးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။သဆေုံးသှားခဲ့ပမေဲ့လူတိုငျးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ Princess Diana ဆိုတာ ကွှငျးကနျြနဆေဲပါ။ သားဖွဈသူကလညျး သူ့ရဲ့အမှတျတရနေ့၊အခမျးအနားနမှေ့ာ သူ့ရဲ့အမကေိုသတိရတမျးတနခေဲ့ပါလိ့မျမယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့အမအေတှကျ နရောတဈနရောစာခနျြထားတာဖွဈနိုငျသလို တဈခြို့ကလညျးဘုရငျမကွီး Elizabeth ရဲ့မွငျကှငျးကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈမှာစိုးလို့ ဘုရငျမကွီးရှမှေ့ာ ဘယျသူမှထိုငျခှငျ့မရှိတာလို့လညျးယူဆခဲ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မငျးသား Harry ဟာ သူ့ရဲ့မင်ျဂလာပှဲနမှေ့ာ အမဖွေဈသူကို သတိရနတေဲ့အကွောငျးကို ထိုငျခုံတဈနရောစာ ခနျြထားတာတဈခုတညျးနဲ့သကျသပွေခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။မငျးသမီး Diana ဟာ သဆေုံးခြိနျမှစလို့ ၂၁နှဈကြျောကွာတဲ့အခြိနျထိ၊အခုအခြိနျထိတိုငျအောငျ တျောဝငျမိသားစုမှာနရောယူနဆေဲပါပဲ။သူမရဲ့သားငယျလေး Harry နဲ့Meghan ဟာ Diana ခဈြမွတျနိုးလှတဲ့ forget-me-nots ပနျးလေးတှနေဲ့ လကျကိုငျပနျးခကျ လုပျဖို့စီစဉျခဲ့ပါတယျ။
သတို့သမီးအရံတှကေိုလညျးထိုပနျးလေးတှနေဲ့ပဲ အလှဆငျပေးခဲ့ပါတယျ။ထိုပနျးလေးတှကေ Diana ဂရုတစိုကျပွုစုစောငျ့ရှောကျခဲ့တဲ့ နနျးတျောဥယြာဉျထဲက ခူးဆှတျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အဖွူရောငျနှငျးဆီ ပနျးတှအေမြားကွီးစိုကျပြိုးထားသလို forget-me-nots ပနျးလေးတှလေညျးအမြားကွီးရှိပါတယျ။မငျးသား Harry ဟာ သူ့ရဲ့အမခေဈြမွတျနိုးလှတဲ့ပနျးလေးတှကေို သူ့ရဲ့မင်ျဂလာဆောငျမှာ ဂုဏျယူစှာဆငျယငျခဲ့သလို သူ့အမအေနှဈသကျဆုံး သီခငျြးကို သူ့ရဲ့မင်ျဂလာဆောငျမှာ တီးခတျစခေဲ့ပွီး အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးကမကျြရညျဝဲလကျြရှိခဲ့တယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
မင်ျဂလာပှဲဓာတျပုံရိုကျကူးတဲ့အခြိနျမှာလညျး Harry ဟာ ဆိုဖာအစိမျးရောငျပျေါမှာထိုငျပွီး ရိုကျခဲ့တာ ကိုမွငျတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီထိုငျခုံက အထူးသီးသနျ့အမှတျတရတှရှေိခဲ့တဲ့ဆိုဖာဖွဈပါတယျ။လှနျခဲ့တဲ့ ၁၉၈၄ ခုနှဈတုနျးက Diana ဟာ အဲ့ဒီဆိုဖာပျေါမှာ Harry လေးကိုခြီပွီးအမှတျတရဓာတျပုံရိုကျကူးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။မငျးသား Harry ရဲ့မင်ျဂလာပှဲကိုတကျရောကျခြီးမွှငျ့ကွသူတှကေလညျး အမကေိုသတိရတမျးတနသေလို ခဈြတဲ့သူနဲ့မင်ျဂလာ လကျထပျပှဲဆငျနှဲရလို့ပြျောရှငျနတေဲ့ Harry အတှကျ ဝမျးသာဝမျးနညျးဖွဈခဲ့ကွ ပါတယျ။စိတျခံစားခကျြ လှယျသူတဈခြို့ကတော့ သူတို့ရဲ့မင်ျဂလာပှဲကိုဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ရငျး မကျြရညျတောငျကခြဲ့ကွပါတယျတဲ့။မငျးသား Harry နဲ့ Meghan တို့ရဲ့မင်ျဂလာပှဲပုံရိပျလေးတှပွေနျပွီးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။